အာမခံပေါ်လစီထုတ်ယူခြင်းစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့် Duty နမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / အာမခံပေါ်လစီထုတ်ယူခြင်းစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့် Duty နမူနာ
အာမခံပေါ်လစီထုတ်ယူခြင်းစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့် Duty နမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 1,170 views
အဘို့ process ကိုအစီအစဉ်များ, ၏ချိန်ညှိ reinstatement, နှင့်အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်း. တာဝန်များအများဆုံးကိစ္စရပ်များကိုယခုရှင်းလင်းခဲ့ကြစေရန်သုတေသနအာမခံ applications များပါဝင်သည်, အာမခံလွှမ်းခြုံပွောငျးလဲအပေါ်ဒေတာပြုစု, မိုး partyis ကျန်တာတွေလိုက်လျောဖို့မူဝါဒကမှတ်တမ်းများပြောင်းလဲနေတဲ့, အစီအစဉ်များကိုခိုင်မာအောင်အဆိုအရ-အော်တို reinstatement ဆုံးဖြတ်ရန်ချုံးအာမခံမူဝါဒများအပေါ်ဖိုင်တွေရယူ, ပွဲစားတို့ကလိုချင်အဖြစ်အာမခံပေါ်လစီများကိုပယ်ဖျက်, နှင့်အာမခံတင်သင်္ဘောအချက်အလက်များ၏အတိအကျအတည်ပြုရန်.
modify, ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှု, နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလက်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပြည်နယ်များကိုဆက်ခံအတွက်မဆိုပြောင်းလဲမှုကိုထင်ဟပ်ဖို့, လွှမ်းခြုံပမာဏ.
အသိပညာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အတည်ပြု, မူလတန်းပေါင်းလဒ်နှင့်တန်ဖိုးအပါအဝင်, အမှတ်တံဆိပ်, ပစ်မှတ်, နှင့်အာမခံ applications များနှင့်မူဝါဒများအပေါ်အိမ်ခေတ်.
ပြည့်စုံရုံးသို့မဟုတ်စက်ရုံစာရွက်စာတမ်းများစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကူညီ, တိုင်း policyholder များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်း, ရွှေ့ဆိုင်းနေကြသည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖြစ်လာဖို့ကြောင်းမူဝါဒများအပါအဝင်.
မူရင်းအာမခံဆော့ဖ်ဝဲမှအက္ခရာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အေဂျင်စီများ, အပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်လျှင်သိရှိနိုင်ရန်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူနှင့်ပွောငျးလဲ၏ဆိုးကျိုးများ.
ပွဲစဉ်ဒေတာဆည်းပူးသို့မဟုတ်သူတို့ကိုအကောင့်အနေအထားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများသိစေရန်အာမခံထားသို့မဟုတ် realtor ဘဲလျက်.
သင်ထောက်ကူမှအချက်အလက်ကို Transcribe နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစာတမ်းများနှင့် Modify Account များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ pc သို့သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်း.
မူဝါဒအ Cancel ၏အာမခံပွဲစားနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲအကြောင်းကြား.
ဖောက်သည်အစည်းအဝေးနှင့်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုမှုများအပေါ်သိကောင်းစရာများ data တွေကိုဆည်းပူးဖို့သူတို့ရဲ့ဖုန်းခေါ်စဉ်းစားပါ.
ဖြစ်စဉ်, အောင်, နှင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များအမျိုးအစားများကိုဖြန့်ဝေ, ထိုကဲ့သို့သောအာမခံသယ်ဆောင်ဖို့လွှမ်းခြုံနှင့် ပတ်သက်. ဥပမာအားထုတ်ဝေ apps တွေအတွက်အဖြစ်.
နှုန်းထားများတွက်ချက်, အထူးလျှော့စျေး, ဝင်ငွေ, ပြုပြင်မွမ်းမံ, အသစ်အရံလိုအပ်ချက်, အာမခံတာဝန်ခံစံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်သမား.
အထက်လူကြီးများအတွက်ကုမ္ပဏီမက်ဆေ့ခ်ျ compose, မန်နေဂျာများ, နှင့်အပြစ်တွေ.
လွှမ်းခြုံ reinstatement နှင့် ပတ်သက်. စံချိန်စံညွှန်းမှတောင်းဆိုမှုကိုထံမှအချက်အလက်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများစိတ်ကျေနပ်မှုအခါ reinstatement ကိုလက်ခံ.
စာရွက်စာတမ်းကနေလွှမ်းခြုံဖျက်သိမ်းမှု၏ printout လက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းမှုကတ်များရယူရန်.
ဘဏ်စာရင်းအကျိုးစီးပွားငွေပေးချေ၏ကွန်ပျူတာက Verify, စည်းဝေးရာသို့ရောက်, နှင့်ညှိနှိုင်းလက်နက်ချ On-ချေးငွေတန်ဖိုး.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသိပညာ-သိမှတ်ကြလော့ရေးစပ်စာပိုဒ်တိုများနှင့်လိုင်းများ Reading.
အခြားအရှေးရှေးအခိုင်အမာအရာပေါ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံစိုက် active-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, သငျသညျတညျဆောကျခံနေရသည့်အချက်များနားမလည်ဖို့အတှကျအခြိနျသုံးပြီး, မှန်ကန်သောအဖြစ်အံ့သြကိစ္စများ, နှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
မစိုက် data တွေကိုဖော်ပြတခြားသူတွေနဲ့စကားပြောနေတာ-စကားပြောဆိုနေခြင်း.
ကြောင်းအားနည်းချက်များနှင့်ချဉ်းကပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့အရေးပါ-အသုံးချပြီးတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်စဉ်းစား, ဒုက္ခမှကောက်ချက်သို့မဟုတ်ရှေးခယျြမှု options များ.
တစ်ဦးချင်းစီပစ္စုပ္ပန်နှင့်အလားအလာရှိသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသစ်သောအချက်အလက်များ၏ဖုံးကွယ် active-သင်ယူ-နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်နှင့်.
သင်ယူခြင်းပြဿနာကိုပညာပေးသို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုကိစ္စရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူတငျပွ coachingPERinstructional အလေ့အထများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထား.
သည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်ဆေးခြင်း-MonitoringORExamining စွမ်းဆောင်ရည်ကို, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအောင်.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ အစီအမံ.
အလေ့အထများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ပြောင်းလဲပစ်ရန် Marketing ကို-လာအောင်အခြားသူတွေ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-Active တစ်ဦးချင်းစီကူညီမှချဉ်းကပ်ရှာကြံ.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-Technologies ကတစ်ဦးချင်းစီနှင့် align လုပ်ဖို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အဆောက်အဦလိုအပ်ပါတယ်အစေခံရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ type ကိုအလုပ်တစ်ခု execute ရန်လိုအပ်ခဲ့.
တပ်ဆင်နေ-Installing tools များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
function စောင့်ကြည့်-မြင်လျှင်နောက်ထပ်ရောဂါလက္ခဏာ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုသင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်တစ်ဦးပစ္စည်းလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာ tools များအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို Maintenance-ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်အခါ upkeep ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်သောဖြစ်လာဆုံးဖြတ်ခြင်း.
troubleshooting-ဆုံးဖြတ်တဲ့ operating ပြဿနာများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်အဆုံးအဖြတ်.
လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်း tools တွေကိုအသုံးချဖို့ပွငျ-ကိုပြုပြင်တာတွေ devices များသို့မဟုတ် devices များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း-ဆောင်ရွက်ခြင်း, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ် performance ကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါ.
စနစ်များအားသုံးသပ်ခြင်း-ဆုံးဖြတ်သည့် setting ကိုအတွက်ပဲဘယ်လောက်တိုးတက်မှု, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အဖြစ်ပြဿနာများသက်ရောက်မှု impact မည်သည့်စနစ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လို.
အချိန်ကိုယ်ပိုင်ကာလ oneis စီမံခန့်ခွဲမှု-ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်လည်းတခြားသူတွေရဲ့အခါသမယ.
ဘဏ္ဍာရေးဒေါ်လာပြည့်စုံ task ကိုဆည်းပူးရန်သုံးစွဲခြင်းကိုခံရဖွယ်ရှိသည်မည်မျှအရင်းအမြစ်များ-ကိုစူးစမ်း၏စစ်ဆင်ရေး, နှင့်စာရင်းအင်းသည်ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်..
ပစ္စည်းများ tool များ၏စံပြအသုံးပြုမှုအတွက်နည်းလမ်းများ-လက်ခံခြင်းနှင့်မြင်နေ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, အဆောက်အ, နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုတိကျတဲ့ function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-stimulation ၏စစ်ဆင်ရေး, ကို, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းရှေးရှေးဦးဆောင်, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအဆုံးအဖြတ်.
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, ပတ်ပတ်လည်နှင့်အပါအဝင်4နှစ်ပေါင်း
အောင်မြင်မှု / လုပ်ငန်း – 90.47%
ဇှဲကောငျးခွငျး – 92.28%
စီမံကိန်း – 87.27%
အမိန့် – 80.82%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 90.06%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 88.14%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 91.09%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 92.93%
ဖိအား Threshold – 87.24%
ဘက်စုံ / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် – 81.36%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 95.70%
ရှုထောင့်များ၏အသိအမြင် – 96.95%
ရိုးသားခြင်း – 92.67%
လွတ်လပ်ခြင်း – 91.84%
တီထွင်မှု – 85.90%
စဉ်းစား – 92.59%